Mandehana mamakivaky ny Milky Way miaraka amin'ny saka tsy fantatra ao Mr.Catt | Androidsis
Ampio ity saka tsy fantatra miafina ity amin'ny diany mamaky ny Milky Way ao amin'i Mr. Cat
Misy piozila maro toy ny Candy Crush Soda ao amin'ny Google Play Store, fa raha te hanakaiky kokoa izahay iray izay tena tsy mitovy ao anatin'io sokajy io, angamba mety hampirisika anao hamaky ilay boaty aho hividy Concrete Jungle, lalao video Sim City izay maneho kalitao marobe ary miaro ny fananganana tanàna. Ny lalao toa itony kely hafa kely dia tsy dia mora hita loatra ary amin'ity dieny ity mikaroka mekanika izay tototry ny fahatsapantsika tena faharatsiana, matetika isika dia mirotsaka amin'ny lalao video am-polony izay esorintsika amin'ny fanovana voalohany. Tsy segondra fotsiny izy ireo raha hanapa-kevitra raha misy lalao tiako na tsia, ary ny marina dia ny filalaovana maro dia maro ianao no tsy mahomby.
Ny iray amin'ireo izay matetika manana zavatra manokana, na dia hilalao mandritra ny andro vitsivitsy, na mety herinandro aza, dia Andriamatoa Catt. Lalao video tokony hataonao ampio ilay saka mahafatifaty sy miafina hiampitana ny Milky Way amin'io epiko misy azy io. Araka ny voalaza ao amin'ny pejiny ao amin'ny Google Play Store, hitety tontolo mahafinaritra ianao amin'ny lalao inteligence izay manambatra ireo singa fisainana mitsikera miaraka amin'ny fahafinaretana amin'ny fanesorana ireo sakana. Amin'ny fomba lehibe isika dia amidy lalao izay manana fomba hafa amin'ny fahazoana ny atao hoe Candy Crash Saga sy ny maro hafa izay tsy maintsy alamina andiana sakana mitovy loko. Eto, farafaharatsiny, hafa ny nanaovan'izy ireo izany tamin'ny hatsaran-tarehy mendrika hotononina ary mahatratra izay tadiavintsika, izay manintona antsika tsy azo ihodivirana.
1 Puzzles misy fombany be
2 Angony ny masoandro, ny kintana ary ny volana
Puzzles misy fombany be
Andriamatoa Catt dia manana izay rehetra azo angatahina amin'ny lalao amin'ity fomba ity amin'ny lafiny teknika. Avy amin'ny manodidina sary 2D tena tsara, sary mihetsika izay afaka misarika ny sain'ny mpilalao, na mozika tsotra nefa mahomby, dia afaka mampiseho amintsika fa mbola lavitra ny lalana amin'ity karazana lalao video ity izay mamporisika antsika hampiasa ilay ampahany volondohan'io ati-doha io manana ao anatin'ny karan-dohan-dohantsika isika.
Miatrika lalao iray nahazo ny loka Silver izahay, Mozika sy effets tsara indrindra ao Bahamut ACG 2016. Catt dia mamakivaky ny Milky Way ary mila manampy azy ianao amin'ny fahasarotana izay sendra azy eny an-dalana. Tontolo iray feno piozila no miandry anao hahafantaranao ny fomba mifindra ireo taila miloko ireo izay mamorona fomba manokana iray hamahana azy ireo. Hanana fihetsiketsahana fetra maromaro ianao sy karazan-doko miloko sasany izay tsy maintsy apetrakao ka ny tsipika misy ny 3 na dimy dia natao hananganana kometa iray manontolo. Amin'ireo andalana noforoninao ireo dia tsy maintsy misy kintana hahafahanao manohy amin'ny dingana manaraka.
Angony ny masoandro, ny kintana ary ny volana
Amin'ity traikefa nahafinaritra an-habakabaka ity dia ho hitan'i Catt aloha karazana kintana selestialy rehetra izay tsy maintsy angoninao amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo sakana rehetra ireo izay hametraka anao eo alohan'ny piozila sarotra be. Hanana ny safidy hamerenana indray ny lalao foana ianao, satria arakaraka ny tsy fahombiazanao no hitomboanao amin'ny ambaratonga manaraka amin'ireo.
AndriamatoaCatt dia mampiasa sary mampihetsi-po tokoa sary kanto ary ny vokatra izay manan-talenta amin'ny zava-bitany. Io no setrany izay ankasitrahana indrindra rehefa milalao an'ity lohateny ity izay nahatratra ny Play Store isika mba ho lasa iray amin'ireo piozila manokana ananantsika amin'izao fotoana izao amin'ny Android hatreto amin'ity taona ity.
Raha ao anaty piozila ianao, ny lalao toa ny Candy Crash sy a fisehoana ivelany mahafinaritra, efa mila fotoana ny maka ilay widget izay ho hitanao etsy ambany hametrahana azy amin'ny findainao.
Rehefa mandray valisoa dia efa misy afaka mandray ny degre ny kalitao teknika ho hitanao rehefa mandefa azy ianao. Hainy tsara ny milalao ny karany amin'ny sary, mozika ary ny sary na ny sary mba hanehoana fa mahay manao zavatra tsara ity studio ity. Iray amin'ireo zava-dehibe ilaina amin'ny ankamantatra.
Fomba fijery tsara
Mahafinaritra ny piozila ataon'izy ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ampio ity saka tsy fantatra miafina ity amin'ny diany mamaky ny Milky Way ao amin'i Mr. Cat
Kilalao milamina izay mampiasa Origami ao amin'ny Paper Wings